Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma usoro iji jide n'aka na music ebudatara na format onye ọrụ na-achọ ya na otutu nyiwe na-akwado. Nke a bụkwa otu n'ime ndị usoro nke ekwe ka onye ọrụ iji na-enweta nsonaazụ kacha mma na-azọpụta nnukwu mpịakọta nke music na na draịvụ ike. Ụfọdụ ọrụ na-Otú ọ dị bụghị na a àgwà nke nbudata music otú a zuru ezu nkuzi ga-ahụ na ndị nile dị otú music hụrụ na-kpuchie na nke kacha mma n'ụzọ.
Ọ bụ a dịtụ ochie ụdị nke na-azọpụta music jidesie magnetik etere nke e mgbe ahụ na-egwuri na ngwaọrụ nke e bu n'uche maka otu nzube. Na Itie nke oge na mmepe nke nkà na ụzụ ọhụrụ usoro a ka okokụre na iwere n'elu site elu na-arụzi ụgbọala. Ọ na-amara dị ka teepu data mbanye na etere na e ji na usoro ndị na-abụghị obodo na maka otu ihe ahụ ha ọ bụghị nanị na nchebe maka data nchekwa na transfer ma ha ike jide data na a nnọọ nnukwu ego. Ke Ruth nke ọganihu na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ ọ dịla gharazie ịba uru na ugbu a nanị teepu music ememme a na-San Francisco n'afọ ọ bụla ka ememe ncheta technology.
A ka na-eji na ndị ọrụ ịzụta music na ụdị nke CD na DVD si nọgide na-enwe ha collection. Ma ọnụ ọgụgụ nke ndị dị otú ahụ ọrụ dị nta. Ọ nwekwara ike na-ahuta ka ụdị music na ike ga-azọpụta jidesie magnetik disk na ntụpọ ejide data. Ndị a ntụpọ bụ otú obere na gba ọtọ anya apụghị ịchọpụta ha na ndị niile data a na-echekwa n'ime. The onu na-mara dị dijitalụ ọdịyo na ọ na-echekwa ụkpụrụ na ọnụọgụ abụọ ụdị ebre nke ahụ ngwa ngwa nke a na-aga n'ihu track ma ọ bụ ụda a nụrụ na nke a. E nwere ụfọdụ formats ihe atụ ma ọ bụrụ na a ụda na-echekwara na PDF uru ọ bụ nke ọ bụla ojiji na niile na ọ bụrụ na otu na-echekwara na mp3 uru mgbe ahụ, ọ ga-eji na nzube echekwara.
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma isi jide n'aka na music na-abụghị nanị nụrụ kamakwa na-akọrọ ndị ọrụ nke yiri mmasị. The n'ozuzu internet music omume jide n'aka na onye ọrụ nwere ike ịkekọrịta mmasị tracks na ngwaọrụ maka offline ojiji na nwere ike ịkekọrịta ọdịnaya na listi ọkpụkpọ na ndị ọrụ ndị ọzọ nke mere na ha nwere ike inwe arụpụta ihe kasị mma na ndị pụrụ inweta na egwu enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu . Ndị isi uru bụ na ọ bụ free niile oge, mpaghara na asụsụ dabeere mgbochi.
3 ụzọ nke ịnụ ụtọ internet music online for free
The ụzọ atọ na a ga-atụle n'isiokwu na-nke a na-eso na ha bụkwa ndị zuru ebe nile n'ụwa nile ruru ha iche:
1. Iji weebụsaịtị
2. Online redio
3. ekwentị ngwa
4. Download free internet music na TunesGo
Ụzọ ndị a ga--atụle ugbu a otu otu na ọrụ na onye ga-eduzi na enyemaka nke screenshots mere na echiche na-aghọ cleat na onye ọrụ na-adịghị ga-enwe ihe ọ bụla nke na nke a:
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma isi jide n'aka na music a nụrụ online na ọ dịghị nbudata a chọrọ. Ụzọ niile nke ntị music na e kwuru n'elu chọrọ na-aga n'ihu internet Njikọta. The usoro nke ime ka n'aka na music a nụrụ online iji a website e kọwara n'okpuru:
1. Onye ọrụ kwesịrị ileta https://emp3world.so/ ka ịnweta website. Ọ bụ na-kwuru na nke a website bụ naanị iwere dị ka ihe atụ
2. The search mmanya nwere ike mgbe ahụ ga-eji na-eme ka n'aka na song na-achọgharị na-anụ
3. The peeji na-esonụ nke website ga-ahụ na-egosi ka anya dị ka ndị chọrọ song a pịrị
4. The play button bụ mgbe ahụ na-enwe n'ihu n'ihu:
5. The song ga-ahụ ga-egwu na onye ọrụ nwere ike na-enweta ya mfe:
Usoro na e metụtara isiokwu e kọwara n'okpuru ebe iji jide n'aka na ihe kasị mma pụta na-nyere ka onye ọrụ:
1. Onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ na meghere:
2. site na isi menu onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na mgbasa ozi na-ahọrọ:
3. The netwọk nwere iyi mgbe ahụ ka a ga-emeghe:
4. The adreesị nke redio bụ mgbe ahụ na-banyere:
5. The play button bụ mgbe ahụ na-pịrị iji jide n'aka na usoro-agwụ ebe a:
Ọ bụkwa otu n'ime n'ibu nke jide n'aka na music ke laa bụghị ihe nke mgbe nile. Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị na-esonụ usoro a soro na na dị ka ọ bụ iji na-enweta nsonaazụ kacha mma:
1. The Google play ngwa bụ ka ike ibudata na arụnyere na na na ozugbo ọ e mere na ọ bụ mgbe a ga-emeghe:
2. The onye ọrụ nwere ike chọọ na songs site genre na ndị ọzọ na nhọrọ na dị:
3. The music nwekwara ike-achọ na onye ọrụ nwekwara ike ịchọgharị na ndị ọzọ ọkaibe nhọrọ na-egwu na ngwa na-ege ntị na music online: -
oyiyi maka Nzọụkwụ 1 oyiyi maka nzọụkwụ 2 oyiyi maka Nzọụkwụ 3
Download free internet music na TunesGo
TunesGo bụ otu nke kasị mma software omume na a pụrụ iji mee na nke a na-eme ka n'aka na online music na-abụghị nanị na-egwuri kamakwa ebudatara na ala na afọ ojuju. Iji jide n'aka na arụpụta ihe kasị mma na-emepụta usoro e kwuru ebe a bụ na a ga-agbaso dị ka ọ bụ:
Music transfer na batches
Ọ dịghị ígwé ojii technology aka.
1. Ihe omume ahụ bụ ka ike ibudata na niile kpaliri na-soro na nke a:
2. Na ndabara homepage onye ọrụ kwesịrị ka pịa YouTube ka iTunes nhọrọ mere na-esote na ihuenyo na-enweta:
3. Onye ọrụ mgbe ahụ kwesịrị ijide n'aka na YouTube URL na-pasted na achọrọ mmanya na download button na-enwe na-eme ka n'aka na song na-abụghị nanị streamed kamakwa ebudatara dị ka mp3 format:
10 Free Music Downloader maka Mac
Top 50 Free Background Music Download
Ịzụta CD si CD Store-anọghị n'ịntanetị
A Ndepụta nke 50 Desktọpụ Music Downloaders, égwu na Plugins
Esi Album osise n'ihi na gị na Music Library
> Resource> Music> Listen Online na Download Free Internet Music